I-Cuan Cottage - Ngoku ine-WiFi!!! - I-Airbnb
I-Cuan Cottage - Ngoku ine-WiFi!!!
Kilquiggan, County Wicklow, Ireland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguThomas And Rita
ICuan Cottage yenye yezindlu ezisemaphandleni ezimbini ezifanayo (enye yiCloch Cottage) ekulindeleke ukuba ibe yiholide epholileyo eIreland 's Garden County. Ikwidolophana entle yaseKilquiggan, yindawo entle yokubuka iWicklow, iWexford neCarlow. Iindonga zelitye lenyengane ezibonakalayo, isitovu seenkuni kunye neendawo ezizingqongileyo ziza kukubuyisela kwixesha elahlukileyo, kodwa iCuan Cottage inazo zonke izinto eziluncedo zale mihla zokwenza uhlale kamnandi kangangoko kunokwenzeka.
ICuan Cottage ikwiKilquiggan ekumbindi welizwe.
4.76 · Izimvo eziyi-139
Iindawo Ezinomtsalane Zasekuhlaleni
Le ndlu ingqongwe ziindawo ezintle ezikufutshane. Kukho neendlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo ezikufutshane.
I-Tomnafinogue Forest (8km)
ngetreyini (9km) I-Tinahely red
looped walk I-Tinahely national
looped walk Ukongezelela ekuhambeni apha kukho ezinye iindawo ezinomtsalane zasekuhlaleni.
UWicklow Gaol (iJele)
uWicklow 's Gaol ubalisa ibali lolwaphulo-mthetho, ubuqhetseba, ukuxhatshazwa, ubuxoki kunye nobunzima bobundlobongela bama-1798. I-gaol dungeon yasekuqaleni ivulekele uluntu okokuqala kwiminyaka engaphezu kweyi-100. (51km) I-Eircode: A67 Y337 (imizuzu eyi-50 xa uqhuba)
Yasemanzini Neengxangxasi Zasemanzini yindawo entle engxangxasi kumlambo i-Dargle kufutshane ne-Enniskerry. Ijikelezwe yiNtaba enkulu ekuthiwa yiSugar Loaf. Ingxangxasi ime kumphakamo weemitha eziyi-, kwaye yeyona ngxangxasi iphakamileyo kwesi siqithi. (iyure eyi-1 ngemoto)
zaseWicklow Iintaba zeWicklow yenye yezona zinto zidumileyo eIreland. Imifudlana emihle ibaleka iye kumachibi anzulu entlambo. Iintaba ziyolula ngaphandle kwemida yaseWicklow kumazwe aseDublin, eWexford naseCarlow.
4. IWicklow Way
IWicklow Way ngumzila weekhilomitha eziyi-115 ogqitha kwiiNtaba ezintle zeWicklow. Lo mzila uqala eMarlay Park kumazantsi eDublin kwaye udlula kwiCounty Wicklow, ngaphambi kokuba iphele kwidolophana yaseClonegal eCounty Carlow. Lo mzila uthatha malunga neentsuku eziyi-5 ukuya kweziyi-7 ukuyenza iyonke. I- idlula kufutshane nendlu esemaphandleni. (500m)
I-Glendalough Glendalough inembali yaye intle. Inamachibi amabini amahle kakhulu eIreland angqongwe luhlaza kunye neentaba, nto leyo ekhokelela ekuthiwa ‘yiValley of Two Lakes'. Indawo ye-monastic yasekwa ngenkulungwane ye-6 yi-St. Kevin. (imizuzu eyi-50 xa uqhuba)
6. Iigadi zeAltamont zihlonitshwe kakhulu njengejuwelari kwisithsaba segadi yaseIreland, iAltamont Gardens
ziigadi eziqaqambileyo nezinohambo olugudle umlambo olugubungela iihektare ezingaphezu kwe-40 (iihektare eziyi-16). Yaziwa njengenye yezona gadi zintle zase-Ireland, le ndawo iphumelela kakhulu kwimithi emininzi ephucukileyo, ekwiindlela nakwiindawo zamahlathi, kunye neziyolo ezintle kuyo yonke iigadi (iikhilomitha eziyi-10)
yaseHuntington Inqaba yaseHuntington ibekwe kumahektare angaphezu kwe-160 eegadi, amahlathi kunye nefama. Inqaba yaseIreland inokhenketho olubangel 'umdla olucacisa imbali yayo yenkulungwane ye-17. Olu khenketho luneTempile edumileyo ehlabathini yase-Isis ekwinqaba yakudala. Inqaba yaseIreland inendawo yokudlala entle emahlathini, kunye nevenkile entle ye-earoom kunye nesipho. (iikhilomitha eziyi-12)
8. I-Greenan maze
iGreenan maze ikwimimandla entle yeenduli zeWicklow, uchithe imini yonke ujikeleze ifama kwindawo epholileyo nenobubele. Xa kukho izinto ezininzi ezinomtsalane onokuzijonga, usuku luza kuba nezinto ezininzi onokuzenza kwaye luza kugcina abantwana behleli ngokupheleleyo. Kukho into wonke umntu kwintsapho anokuyonwabela! (22km)
9. UClara Lara Clara Lara
yindawo yokuza kusuku olunye kwihlabathi lezikrini. Abantwana banokudlala phandle, babaleke, basebenzise indlela abacinga ngayo, balule umzimba baze bangaqapheli ixesha lokudlula. Le yeyona ndawo ifanelekileyo onokuzikhuphela kuyo iintsapho ezivela kwindawo ephithizelayo. UClara Lara Funpark yeyona ndawo onokuya kuyo entlango. (imizuzu eyi-45)
I-Rathwood Rathwood yintsapho ephumelele iimbasa kwivenkile yokutyela.
Ipaki yezilwanyana, ukuhamba emahlathini, ukukhwela uloliwe kunye neendawo zokudlala zabantwana zezinye zezinto ezonwabisayo nezahlukileyo iindwendwe ezinokuzifumana xa zityelela iRathwood. I-Maze yase-Ireland ine-2500 beech hedging ehlanganiswe kunye e-Ireland kwaye igubungela iihektare eziyi-1.2. (imizuzu eyi-5)
Kwiimeko zongxamiseko, fowunela u-
Meadowcroftreon,	Tinahely 0402 38 690
I-Caredoc Tullow (Kwiiyure eziyi-)	1850 334zar
uKiwi Dental (Carlow):
059 914 6796 Iikhemikali Tinahely 0402 38 168
Tullow 059 915 1313
Ihotele ka-0402 38 Murphy 's Hotel 0402
38405 I-Madeleines 0402
28592 Pinetos (takeaway)	0402 28960
I-Sylvios (ukuzikhupha)	0402
60402 IsiTshayina (ukuzikhupha)
087 2977012 I-Tullow (11km)
Rathwood 059 9ngerzar I-Tara Arms	059 9wagen
I-Mount Wolseley Hotel
059 9180100 Ukufa iCow Pub (5km)
Tullow Aldi, Lidl, Supervalu, Tesco
I-Tinahely Centra, Gala
Umbuki zindwendwe ngu- Thomas And Rita
Siphila endleleni esemaphandleni kwaye siza kufumaneka ukuze sincede nangayiphi na indlela esinokuyenza.